Quick Guide: Ahoana no To Travel Cinque Terre By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Quick Guide: Ahoana no To Travel Cinque Terre By Train
(Last Nohavaozina: 28/08/2020)
Italia no iray amin'ny malaza indrindra toerana mpizaha tany eto amin'izao tontolo izao. Olona ondry aman'osy tany tany ho an'ny sakafo mahafinaritra, kolontsaina, ary manan-karena tantara. Raha ny tena izy, na dia tsy manana hitsidika ny tanàna lehibe kokoa mba hiaina ny ody ny Italia. Ny ohatra tsara dia avy izao no hamitaka mihinjitra ny italiana Riviera fantatra amin'ny hoe Cinque Terre. Izy io dia toerana malaza ho an'ny olona izay te-hankafy ny Mediterane sy elektrônika morontsiraka avy ny saina haingana ny fiainana maoderina. Na dia be dia be ny mitoka-monina tanàna sy vohitra teo amin'ny sisin-tanin'i Italia, ny tanàna ny Cinque Terre dia lavitra ny malaza indrindra. Noho ny liana amin'ny ity mahafinaritra toerana, Save A Train dia nametraka torolàlana haingana momba ny fomba hahitana an'i Cinque Terre amin'ny lamasinina.
Nahoana Go By Train?
Maro ny mpizaha tany izay tsy nitsidika Cinque Terre Mety hanontany tena hoe nahoana ny fiaran-dalamby no tsara indrindra safidy. Fanofana fiara sy ny fiara io faritra am-pilaminana toa tsara kokoa, marina? Wrong. Mba hahatakarana ny antony izay tsy azo atao, zava-dehibe ny mahafantatra izay mahatonga ny Cinque Terre. Cinque Terre no tena nanao ny dimy tanànan'ny mpanjono, Noho izany ny anarana (dimy tany). Ireo tanàna ireo Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, ary Monterosso Al Mare. Dimy izy ireo tany am-boalohany lapa amin'ny vondrom-piarahamonina kely manodidina azy ireo. ho tafavoaka velona, tanàna ireo nandray anjara tamin'ny fanjonoana sy fambolena. Ary ny zana-bohiny dia, mandra-pahatongan'ny vao haingana, mifandray amin'ny tongotra lavitra lalana ary ireo ihany no azo idirana ny rail na ranomasina.
Ireo tanàna ireo intsony ao amin'ny fitokana-monina toy ireo taona maro lasa izay. Na izany aza, dia mbola lavitra foana ny fahatsapana fa Maro no tia. Roads no mitarika ny sasany amin'ireo tanàna ankehitriny, fa tena tery ary mety ho mampidi-doza dia ho an 'ireo izay vaovao ny lalana. Raha tonga ny tanàna amin'ny alalan'ny fiara, dia tsy ho afaka ny handeha eo azy ireo fiara. Mba hisorohana ny loza sy ny tsy mety hanakana, dia tsara indrindra mba hitsidika ny tanàna miaraka amin'ny rafitra mety indrindra ny fitaterana fiarandalamby.
Inona no hitranga avy The Cinque Terre Train-dalana,?
Ny fiaran-dalamby Cinque Terre manana tsipika enina fiatoana. Ny lamin 'ireo fiatoana dia La Spezia (foibe fitaterana foiben'ny ao amin'ny faritra), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, ary avy eo dia farany Levanto. Ireo nivezivezy dia somary fohy ary tsy maka fotoana be izany. Ny niala tao La Spezia ny Riomaggiore maka ny 10 minitra. Ny nivezivezy teo amin'ny Cinque Terre tanàna manodidina 5 minitra tsirairay. Ireo fiaran-dalamby mandalo tonelina maizina izay daty miverina any amin'ny 1870s. Izany dia mahafinaritra traikefa mandalo amin'ny maizina tampoka ary avy eo dia nahita ny famirapiratry ny mazava, ary mahatalanjona hevitra ny Ranomasina Mediterane.
Ireo fiaran-dalamby tsy ho matetika toy ny manantena fa nomena ny lavitra eo ny toerana. Matetika izy ireo indray mandeha isan-mihazakazaka ora, fa izao dia afaka Miovaova arakaraka ny fotoana ny fotoana. Na izany aza, dia tsara indrindra foana ny mangataka fanazavana fanampiny, rehefa mividy ny tapakila. Ankoatra ny fahafantarana ny fandaharam-potoana sy ny fotoana Travel ity fiaran-dalamby lalana, dia zava-dehibe ny hanamafy ny tapakila. Misy milina fankatoavana eo amin'ny fiaran-dalamby sehatra fa afaka mampiasa. Rehetra tsy maintsy atao dia solafaka ny tery faran'ny tapakila ho ao an-slot ny milina kely mavo ary miandry ny hihaino ny hajia.
Riomaggiore no ho ny voalohany na fijanonana (raha nizotra avy any La Spezia) na ny fahadimy fijanonana (raha nitodi-doha avy Levanto). Na izany aza, dia tena azo inoana fa handeha ho fijanonana voalohany ho an'ny maro Cinque Terre mpitsidika, satria izany no fomba haingana indrindra ahatongavana any. Riomaggiore no lehibe indrindra ao amin'ny tanàna dimy, ary izany dia ny tsy ofisialy ny renivohitra hatramin'ny lehibe birao no valan-javaboary. Ny trano rehetra dia mihantona ny hantsana eo amin'ny lohasaha, ny làlana mankany amin'ny seranana kely. Ny sehatry ny trano miloko tanora peeling dia tsara tarehy, ary hitoetra ao an-fahatsiarovana mandrakizay. Izany dia fahitana mahafinaritra ny mahita ny masoandro, ary izany dia tsy maintsy mahita ny mpivady izay te-hizara ny fotoana manokana.
La Spezia ny Riomaggiore Lamasinina
Florence ho Riomaggiore Lamasinina
Modena ho Riomaggiore Lamasinina
Livorno ny Riomaggiore Lamasinina
Manarola dia Petit tanàna izay toa ranon any an-Cinque Terre morontsiraka Raha jerena maimaika. Ny fiheverana ny ravahan'ny trano iray mareva-doko tsara tarehy fahitana. Tonga lafatra izy io nafangaro italiana kolontsaina sy ny mikitoantoana toetra. Rehefa mandray amin'ny fomba fijery tsara tarehy, dia afaka hijery ny tanàna. Manarola manana seranan-tsambo kely izay manasongadina ny sambo fiakarana sy ny filomanosana lavaka. ny ny toerana tonga lafatra mba haka milomano ary manao antsitrika harambato sasany. Niaraka tamin'ny seranan-tsambo fanjonoana dia maro sambo izay isan 'ny mponina any Manarola. Ny fomban-drazana ny misambotra sy mihinana trondro dia mbola velona, ​​ary mandroso tsara ao an-tanàna.
La Spezia ny Manarola Lamasinina
Riomaggiore ho Manarola Lamasinina
Sarzana ho Manarola Lamasinina
Levanto ny Manarola Lamasinina
Ny tsirairay amin'ireo tanàna dimy manana ny hatsarany sasany. Corniglia dia manokana satria tsy momba ny drano. Na izany aza, ny zavatra tsy ampy eo amin'ny torapasika, azy mihoatra noho ny mahafaka ny tsy manam-paharoa sy ny hatsaran-tarehy manokana. Mahatsiaro lavitra lavitra noho ny tanàna hafa. Na izany aza, dia manolotra ny aina kokoa sy rivo-piainana ao an-toerana. Ny tanàna Matetika no odian-tsy hita noho ny lalana sarotra. Tsy toy ny tanàna hafa izay mety ho azo sambo, Corniglia dia teo an-tampon'ny havoana ary ny tsy manan-dranomasina miditra. Ny hany fomba ho tonga tokoa ny tongotra ny Cinque Terre lalana na ny handray ny fiaran-dalamby. Na izany aza, dia zava-dehibe ny manamarika fa ny fiaran-dalamby, dia tsy hiantra anao akory ezaka ara-batana. Mbola mila mandeha tohatra ianao hahatongavana eny afovoan-tanàna ary hahita izay rehetra atolotry ny vohitra kely.
Corniglia manana hevitra mahafinaritra izay mamela anao hahita ny ankamaroan'ny manodidina havoana sy ny ranomasimbe midadasika. Ny Belvedere tao an-tanàna dia lehibe toerana handeha haka amin'ny fihaingoana Cinque Terre. Rehefa manao izany ianao dia afaka mankafy ny tsirony ny tanàna tolotra, from mahagaga pesto ho matsiro divay. Corniglia manana manan-karena tantara ny fanaovana divay, Ary raha toa ianao ka tsara vintana ampy namana ny mponina, afaka hanandrana sy hianatra momba ny divay.
La Spezia ny Corniglia Lamasinina
Florence ho Corniglia Lamasinina
Manarola ho Corniglia Lamasinina
Levant ho Corniglia Lamasinina
Vernazza Heverina ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra amin'ny tsy Cinque Terre, fa ny firenena iray manontolo ny Italia. Izany dia azo antoka fa ny avo indrindra amin'ny kavim-Cinque Terre izay mahatonga ny maro raiki-pitia ny dia. Izany dia kanto kokoa sy nentim-paharazana no mihevitra fa ny tanàna hafa tsy. Manambatra fa ny miavaka sakafo sy ny zava-mahagaga, ary mahazo toerana izay miantoka fitsidihana faharoa. Ho azo antoka ny hitsidika ny trano mimanda, rehefa Doria in Vernazza. Ahitana ny iray amin'ireo tilikambo am-boalohany farany izay niaro ny vahoakan 'ny am-polo taona lasa izay tanàna.
Corniglia ho Vernazza Lamasinina
Florence ho Vernazza Lamasinina
Bologna ny Vernazza Lamasinina
Riomaggiore ho Vernazza Lamasinina
Monterosso Al Mare dia isalasalana fa indrindra touristy sy ny ala nenina toy ny tanàna ao amin'ny Cinque Terre. Manana fiara, trano fandraisam-bahiny sy ny vatokilonjy torapasika tonga lafatra ho an'ny mpizaha tany. Raha te-hitsidika mahavariana io tapany Italia, fa misafidy maoderina kokoa Vibe, avy eo dia ho anao Monterosso. Monterosso manana Toerana fitsangantsanganana tanteraka ho hariva Fivezivezena, ary na dia tsara kokoa, izy ireo tsara fisakafoana izay hahatonga na iza na iza tia hazan-dranomasina.
Araka ny hitanao izao, Cinque Terre manana be dia be ny tolotra mpitsidika izay te-hiaina tsy manam-paharoa Italiana traikefa. Tsy dia manana dimy manokana tanàna izay mampanantena TSY HAY HADINOINA. Boky A Ticket noho ny Train ary avelao ny tenanao hanana traikefa iray izay tsy mitovy amin'ny hafa rehetra.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Quick Guide: Ahoana no To Travel Cinque Terre By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-cinque-terre-train/ – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny /io ny /na fr /de sy fiteny maro.
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride fiaran-dalamby soso-kevitra travelitaly
4 Train Travel Pre-Trip Essentials In Eoropa